सोनालीको आफ्नै लापरवाहीले चौथो स्तरमा पुगेको थियो क्यान्सर, तपाइँ सचेत रहनुहोला !, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
एजेन्सी। बलिउड अभिनेत्री सोनाली बेन्द्रेले ४ जुलाइका दिन सामाजिक संजालमार्फत आफूलाई हाइ ग्रेड क्यान्सर भएको र यो अन्तिम अवस्थामा रहेको बताएकी थिइन् । सोनाली अहिले न्यूयोर्कमा उपचार गराउँदै छिन् । यो खबरपछि बलिउड र सोनालीका फ्यानले उनको स्वास्थ्यलाभको कामना गरिरहेका छन् । यही बीचमा मेडिकल रिपोर्टमा खुलासा भएको छ कि सोनालीकै लापरवाहीका कारण क्यान्सर हाइ ग्रेडसम्म पुगेको थियो ।
सोनालीले जुन पोस्ट ट्वीटरमा शेयर गरेकी थिइन् त्यसमा मेटास्टेटिक क्यान्सर उल्लेख थियो । यो क्यान्सरको निकै गम्भीर रुप हो । यस्तो स्थितिमा क्यान्सर सेल निकै छिटो शरीरको एक भागबाट अर्को भागमा फैलिन्छन् । यसलाई चौथो स्टेजको क्यान्सर पनि भनिन्छ ।